Apple Music inoti inobhadhara peni yega yega kubereka kune muenzi | IPhone nhau
Ngirozi Gonzalez | 18/04/2021 18:00 | Apple Music, Noticias
Spotify uye Apple Music vari pamusoro pekutenderera mimhanzi masevhisi. Kunyangwe hwaro hwekuteerera huri kukura paApple Music, Spotify achiri mambo. Iine vanopfuura mamirioni zana nemakumi mashanu evashandisi vePrimiyamu uye vanopfuura mamirioni mazana maviri nemakumi mashanu evashandisi vari pasi pekuteerera kushambadza, inotungamira musika unowedzera kukwikwidza mauri maartist anoda hukuru hwakawanda hwehupfumi. Mukuburitswa kwenhau kwakatumirwa neApple Music kune maartist, vagadziri uye makambani ekurekodha, nzira yekubhadhara yebasa yakasimbiswa uye zvinobva zvaitika kuti Big Apple inobhadhara chikamu chimwe chete chedhora pane imwe neimwe inogadzirwa.
Apple inobhadhara peni pakuterera, zvakapetwa izvo zvinobhadharwa neSpotify
La note naApple Music akazvarwa nekuda kwezvikonzero zvakati. Kutanga, mukupindura kune iro rakaburitswa neSpotify mavhiki mashoma apfuura kwarakatsanangura mabatiro aro mubayiro wevaimbi. Chechipiri, kuramba uchichengetedza pachena kujeka pakati peApple Music uye maartist, basa rakakosha revaya vanobva kuCupertino vakasimbisa pazviitiko zvakati kuti zvakakosha kwazvo kwavari. Uye, pakupedzisira, kuyedza kukwezva hunyanzvi hwekudyara kuti vange vachiwedzera mari uye zvakanyanya mune zvakasarudzika zvemukati paApple mumhanzi wekushambadzira sevhisi.
Dhenari rimwe chete kune vese teerera ndizvo zvinobhadharwa neApple Music muimbi. Nekudaro, kwete ese akawanda emari iyi anoenda kumhizha iye, asi kune vamiririri: rekodhi kambani, vaparidzi, vanoshambadzira, nezvimwe. Kana tikazvienzanisa nenzira inobhadharwa naSpotify tinoona kuti inenge yakapetwa kaviri sezvo Spotify ichibhadhara pakati pechetatu nehafu muzana yedhora kune mumwe nemumwe anoteerera. Zvisinei, mhedzisiro mhedzisiro ndeyekuti Spotify inogadzira yakawanda mari kubva kune yakakura inoshandisa mushandisi base yainayo.
Chekupedzisira, isu tinofanira zvakare kusimbisa iyo mavambo ekubhadhara neApple Music izvo zvinouya zviri mukati kubva pakubhadhara kunyoreswa nevashandisi. Nepo Spotify iine chikamu chakakura chevashambadzi vanobhadhara kuti vaonekwe sevashambadziri kune vanopfuura mamirioni mazana maviri evashandisi vasingabhadharire iyo yePrimiyamu sevhisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Music » Apple Music inoti inobhadhara peni yega yega kubereka kune muimbi
Yese nhau iyo Apple ichaunza pachiitiko chayo